ukwenza ipellets zokutya kwenkukhu kwifama yenkukhu
Abanye abalimi beenkukhu baqhele ukondla iinkukhu ngeenkozo eziluhlaza ezifana nombona, Millet, isisu, njl. Oku akunciphisi kuphela ukusetyenziswa kokutya kodwa kukwenzakalisa iinkukhu, kuya kubangela ukuba kuchitheke ukutya okungaphezulu., gcina imali kodwa ireyithi yokusebenzisa ukutya iphantsi. Kuba iinkukhu azinamazinyo kwaye ziginye ngaphandle kokuhlafuna, yayo inamathumbu amafutshane.Iikickens ezityiwayo ziya kuhlala emathunjini ixesha elifutshane nje 4 iiyure, Kunzima ukugaya ngokupheleleyo kwaye ukufunxa,Inkunkuma eninzi yokutya. Kuba iinkukhu zondla nje ngohlobo oluthile lwengqolowa, Iindidi zazo azinamali kwaye izondlo zazo aziphelelanga. Ukutyisa ixesha elide kuyakubangela ifuthe ekukhuleni nasekuhlumeni kwenkukhu.Ukuxhasa iinkukhu ngenkozo ekrwada kunamanqanaba aphantsi okutya kunye nokungondleki okungaphelelanga., okukhokelela ekukhuleni kakubi kwamantshontsho eentsana,ukukhula kancinci kwee-broilers,ukuveliswa kweqanda eliphantsi, kunye nokusebenza okuncinci kwezoqoqosho. Indlela echanekileyo yokutyisa kukugraya amazimba aluhlaza njengombona,ingqolowa ukuya kumgubo kwaye yenza ezinye izinto ezifana ne-bran, ikhekhe, isidlo seentlanzi, ithambo lokutya, isidlo samatye, njl njl, emva koko yondla inkukhu.
Ukutyisa amantshontsho abantwana kufuna amandla aphezulu kunye neemfuno zeprotein ephezulu. Kwizabelo ngokubanzi, amabele (umbona, irayisi eyaphukileyo, njl.) yi-50-60%, ingqolowa (irayisi, ingqolowa, njl.) yi 5-10%; iikeyiki zeoyile (ikhekhe lekhekhe, ikhekhe, ikhekhe lesame, njl.) zezi 20-25%; ukutya kwezilwanyana (isidlo seentlanzi, isidlo senyama, njl.) yi 7-20%; ithambo lokutya, igobolondo 4-5%; itafile yetafile 0.3-0.5%. Ukutya okuluhlaza kutyiwa ukongeza, ngakumbi xa kungekho vithamini longezelelekileyo, ukutya okuluhlaza akunakunyiswa ngaphandle, kwaye ubungakanani bokutya malunga 30-50% yokondla okugxininisayo.
Ukufakwa kweenkukhu kufuneka inqanaba elithile leeprotein kunye neiminerali ukwenzela ukuvelisa la maqanda imihla ngemihla. Abanakho okuninzi ngendlela yogcino. Ukwenza iqokobhe, Kuya kufuneka kuqala athathe ikhalsiyam kwisondlo sakhe, yigcine emathanjeni akhe, kwaye emva koko ulikhuphe kula mathambo.I.Iqanda elimhlophe liphantse laba yiprotey emsulwa, kwaye ke kufuneka etyile ngokuqinileyo iproteni ukuze ayikhuphe ngendlela yeqanda.
Ukwenzela ukukhuthaza ukukhula okuqhelekileyo kwee-broilers, thintela izifo, ukunyusa isivuno kunye nokusebenza kakuhle kwezoqoqosho,Ipellet yokondla kufuneka yongeze ii-amino acid, iivithamini, ukulandelela izinto, amayeza okubulala iintsholongwane, antioxidants, fungicides, Ii-enzymes kunye nemibala yokuphucula i-broiler ekhula.Iimpawu kufuneka zenziwe ngomxube kwaye zidityaniswe kwisondlo.Uhlobo kunye nenani longezo kufuneka limiselwe ngokweemfuno ezizezona, njengokutya okuninzi okutya, Iivithamini kunye nezinto zomkhondo zingaphelelanga, Kufuneka unike ingqalelo ukongeza icandelo elifanelekileyo leevithamini ezahlukeneyo kunye nezinto ezilandelelwayo, Imvula ehlotyeni ihlala yongeza iiarhente ezichasene ne -ypteythi kunye nee-antioxidants.